Gemz Social စျေး - အွန်လိုင်း GEMZ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Gemz Social (GEMZ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Gemz Social (GEMZ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Gemz Social ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Gemz Social တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Gemz Social များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Gemz SocialGEMZ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0112Gemz SocialGEMZ သို့ ယူရိုEUR€0.00946Gemz SocialGEMZ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00856Gemz SocialGEMZ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0102Gemz SocialGEMZ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0996Gemz SocialGEMZ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0705Gemz SocialGEMZ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.247Gemz SocialGEMZ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0416Gemz SocialGEMZ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0149Gemz SocialGEMZ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0156Gemz SocialGEMZ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.246Gemz SocialGEMZ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0868Gemz SocialGEMZ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0607Gemz SocialGEMZ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.839Gemz SocialGEMZ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.89Gemz SocialGEMZ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0154Gemz SocialGEMZ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0171Gemz SocialGEMZ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.349Gemz SocialGEMZ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0779Gemz SocialGEMZ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.19Gemz SocialGEMZ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩13.3Gemz SocialGEMZ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦4.33Gemz SocialGEMZ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.816Gemz SocialGEMZ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.306
Gemz SocialGEMZ သို့ BitcoinBTC0.000001 Gemz SocialGEMZ သို့ EthereumETH0.00003 Gemz SocialGEMZ သို့ LitecoinLTC0.000206 Gemz SocialGEMZ သို့ DigitalCashDASH0.000123 Gemz SocialGEMZ သို့ MoneroXMR0.000126 Gemz SocialGEMZ သို့ NxtNXT0.874 Gemz SocialGEMZ သို့ Ethereum ClassicETC0.00165 Gemz SocialGEMZ သို့ DogecoinDOGE3.23 Gemz SocialGEMZ သို့ ZCashZEC0.000136 Gemz SocialGEMZ သို့ BitsharesBTS0.345 Gemz SocialGEMZ သို့ DigiByteDGB0.359 Gemz SocialGEMZ သို့ RippleXRP0.0398 Gemz SocialGEMZ သို့ BitcoinDarkBTCD0.000386 Gemz SocialGEMZ သို့ PeerCoinPPC0.0372 Gemz SocialGEMZ သို့ CraigsCoinCRAIG5.11 Gemz SocialGEMZ သို့ BitstakeXBS0.478 Gemz SocialGEMZ သို့ PayCoinXPY0.196 Gemz SocialGEMZ သို့ ProsperCoinPRC1.41 Gemz SocialGEMZ သို့ YbCoinYBC0.000006 Gemz SocialGEMZ သို့ DarkKushDANK3.6 Gemz SocialGEMZ သို့ GiveCoinGIVE24.27 Gemz SocialGEMZ သို့ KoboCoinKOBO2.55 Gemz SocialGEMZ သို့ DarkTokenDT0.0103 Gemz SocialGEMZ သို့ CETUS CoinCETI32.36